Amaxesha afunyenwe kwiOyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Izinto eziHlangeneyo zeThutyana
Kumkhondo weenkumbulo eziqulethwe | Ukulandela iinkumbulo zemizimba yethu
Abalondolozi, amagcisa kunye nabasebenzi bezenkcubeko bajongana nobunikazi, iinkumbulo ezizezabo kunye nezo zivela kwi-diasporic, decolonial kunye ne-queer. Uphando, ugcino, umboniso kunye neprojekthi yokusebenza ebandakanya ngaphezulu kwe-40 yabantu. Iziphumo, ukudibana kunye nemibuzo evela kwiiprojekthi ziya kuxoxwa ngexesha UMTSHATO WOBUGCISA OBUMISELWEYO thaca kwaye ibhiyozelwa ukusuka nge-8 ka-Epreli ukuya kwi-18.
Abagcini, amagcisa, kunye neengcali zenkcubeko baphonononga izazisi, ezabo kunye neenkumbulo eziqulethwe ngokwembono ye-diasporic, ye-decolonial kunye ne-queer. Uphando, ugcino, umboniso kunye neprojekthi yokusebenza ebandakanya abantu abangama-40 +. Iziphumo, ukudibana kunye nemibuzo ephume kwiiprojekthi ziya kuthi thaca kwaye zibhiyozelwe ngexesha le- UMTSHATO WOBUGCISA OBUMISELWEYO ukusuka nge-8 ukuya kwe-18 ku-Epreli.
UMlawuli wobugcisa / Isikhokelo sobugcisa: Madhumita Nandi
IIPROJEKTHI | IINKQUBO
Sizakuba ngubani xa uyeka ukusixelela?
Emva kweeveki ezimbini zokuhlala e-Oyoun, uCornelia Becker kunye noKerim Melik Becker baya eqongeni-bayafunda, bayacula, bayashukuma kwaye bayadlala- kwaye bafaka imibuzo yabo kunye neempendulo kubo ngamagama nangomculo. “Umntu esimthandayo uyafa. Izihlobo zakhe ezisondeleyo- iqabane kunye nonyana-banamava kwaye balenza njani ixesha lokufa nokuzila? Ukujongana noku kukhokelela kumava akhoyo kwaye, ngoncedo lweendlela ezahlukeneyo zobugcisa, ukukhangela iimpendulo ezinokukuthuthuzela kwaye ziphilise. "
Ukulandela ukuhlala iiveki ezimbini e-Oyoun, uCornelia Becker kunye noKerim Melik Becker bazokungena eqongeni-ukufunda, ukucula, ukwenza intshukumo kunye nokudlala-befaka imibuzo yabo kwaye befuna iimpendulo ngolwimi olunomculo kunye nomculo. “Umntu endimthandayo apha. Isalamane sakhe - iqabane kunye nonyana wakhe-bahlangabezana njani namava kunye nexesha lokufa, lokulila? Uphononongo lukhokelela kula mava akhoyo kwaye, ngoncedo lweendlela ezahlukeneyo zobugcisa, kufuna iimpendulo ezinokukuthuthuzela ziphilise. "
Ungayinqandi kunye neMirage
Ngexesha lomnyhadala wobugcisa obugunyazisiweyo, amagcisa ahlukeneyo u-Avril Stormy Unger Avril uzakuthi thaca inkulumbuso ezimbini zehlabathi :: iMirage, ungenelelo lwentsebenzo kwiziko lokuthenga elikhethekileyo e-Bangalore, e-India, ibalaselisa ukungalingani kwesakhiwo ukufikelela kwiimfuno ezisisiseko ezifana nokhathalelo lwempilo kunye namanzi acocekileyo. Umsebenzi wevidiyo wexesha elide Ukungaxakeki, kwelinye icala, ujongene nokuchazwa kwakhona kwesiqu sakho kunye nokuzazisa ngokuzisa ulindelo lwangaphakathi lwentlalo ekukhanyeni.
Umdwebi wezoqeqesho phakathi kwamacandelo u-Avril Stormy Unger uza kuqalisa imisebenzi emibini ngexesha le-FESTIVAL EMBODIED ARTS: Isimanga - ungenelelo lwentengiso e-Bangalore, e-India, eqaqambisa ukungalingani kulwakhiwo ekufikeleleni kwiimfuno ezisisiseko ezinje ngononophelo lwempilo kunye namanzi acocekileyo. Kwaye ukungaxakeki-umsebenzi wevidiyo ohlala ixesha elide usekwe kukuchazwa kwakhona kwesiqu sakho kunye nokuzazisa, ngohambo lokukhupha ulindelo lwangaphakathi lwasentlalweni.
Tjef Sema Paut Neteru
Kwizikhundla zexesha elidlulileyo, uNane wamema abantu ukuba bathathe uhambo lweyoga kunye naye, olulandela inkqubo ye "Tjef Sema Paut Neteru" esekwe kulwazi lakudala lwase-Egypt. Obu buchule be-somatic bunzulu kunxibelelana kwengqondo, umphefumlo, kunye nomzimba ngendlela ebhiyozela ukuzimela komntu ekukhuliseni amandla angaphakathi kunye noxolo. Abathathi-nxaxheba baya kubhala amava abo kwiifomathi ezahlukeneyo zedayari-ukhetho luya kupapashwa. Ngexesha lomsitho wokuvula umnyhadala, uNane uya kusikhokela xa sicamngca.
Kwizikhundla zexesha elidlulileyo, uNane Kahle wamema abathathi-nxaxheba ukuba bamjoyine kuhambo lweyoga, belandela i "Tjef Sema Paut Neteru" System esekwe kulwazi lwase-Egypt yakudala. Le teknoloji ye-somatic iphakamisa unxibelelwano nengqondo yakho, umoya wakho, umzimba wakho kunye nehlabathi lakho langaphakathi ngendlela ebhiyozela ukuzimela kwakho ekukhuliseni amandla angaphakathi kunye noxolo. Abathathi-nxaxheba baya kubhala amava abo kwiifomathi ezahlukeneyo zejenali- ukhetho lwayo luya kupapashwa. Ngexesha lomsitho wokuvula umnyhadala, uNane uya kusikhokelela ekucamngceni.
Umzimba ongenziwa: Kwincoko nelahleko
USana Rizvi ukopa inkqubo yovavanyo kunye neengxoxo ze UMTSHATO WOBUGCISA OBUMISELWEYO, ejongene neentlobo ezahlukeneyo zelahleko- kugxilwe ekubaliseni ngamazwi amatsha. Ngoncedo lwendlela yefilimu, inkumbulo ebhalwe ngokwayo, isimema ukuba sicingisise: Ngaba sinokufumana iindlela ezintsha zokujongana nelahleko kunye nosizi ngokuvula izithuba zezi mvakalelo banokuzibonakalisa kuzo kwaye bafumane ukwamkelwa?
USana Rizvi uza kugcina inkqubo yovavanyo lwemiboniso bhanyabhanya kunye neengxoxo ze UMTSHATO WOBUGCISA OBUMISELWEYO. Iya kujonga kwiindidi ezahlukeneyo zelahleko ezigcinwe yimizimba eyahlukeneyo-kugxilwe ekubalweni kwamabali kumazwi amatsha. Usebenzisa umboniso bhanya-bhanya, inkumbulo eyimemori ngokwayo, isimemo senziwe ukuba sicingisise ngalo mbuzo: ngaba sinokufumana amathuba amatsha ekusebenzeni kwelahleko kunye nosizi ngokuvumela izithuba zokuba ezi mvakalelo zibanjwe kwaye zamkelwe ngendlela ebunjiweyo?
Ukuthatha ingcambu enyameni
UGugulethu 'Dumama' Duma ufundisa ngobunye ubusuku kulo mnyhadala: kunye no-Asmaa Sbou, Jessica Korp kunye noThokozani Heidi Sincuba uxoxa ngomculo kunye neekhathuni zabantu. Ukwabonisa intsebenzo entsha kunye noPurity Mkhize. Igalelo lomnyhadala kaGugulethu ukumema ukuba ucinge ngokunyibilika, malunga nokungazinzi ngokwasemphefumlweni kunye nombala omnyama.
UGugulethu 'Dumama' Duma, wamenywa ukuba azokuthambisela ingokuhlwa yenkqubo yomnyhadala: Kwingxoxo yesigqeba esihlola ezobugcisa kunye neekhathuni zabantu, uzokuzimanya no-Asmaa Sbou, uJessica Korp kunye noThokozani Heidi Sincuba. Uza kwenza umsebenzi omtsha ngentsebenziswano noPurity Mkhize. Igalelo lomnyhadala kaGugulethu limema ukucamngca nge-melancholia, ukungazinzi ngokwasemphefumlweni kunye nombala omnyama.
U-Ahmad Hijazi, ongumdlali weLebhanon osebenza ngeendlela ezininzi ohlala eBerlin, uvavanya ubungangamsha kwimbono yama-Arabhu engaqhelekanga kunye no-Ilk عِلْق, elanda iinkulungwane ezininzi zobomi bobugxwayiba kwibutho lama-Arabhu namaSilamsi. U-Ilk عِلْق ubonisa umbono wekamva lama-Arabhu namaSilamsi ezisa impiliso: imbali iphinda ibhalwe ngokwemiqathango yayo, kunye nesazisi sama-Arab, esiphantse sibe soloko sigqwethiwe kwaye sitolikwa ngendlela engeyiyo, siyasekwa.
Ngo-Ilk عِلْق, u-Ahmad Hijazi, umdlali wase-Lebhanon osekwe kwi-Lebhanon, uphanda ubugqwirha ngokwembono yama-Arab, elandelela iingcambu zobomi bobugqwirha obuhlala kwibutho lama-Arabhu kunye namaSilamsi ukusukela kwiinkulungwane ezidlulileyo. U-Ilk عِلْق uza kumisela umbono wekamva wama-Arabhu wamaSilamsi, oqala ngokuphilisa ngokuphinda abhale iimbali ngokwemiqathango yomntu kunye (kwaye) nokwakha isazisi esiye satolika kakubi sagqwethwa.
+ UMansur Ajang
UDanielle Brathwaite-Shirley ngumculi omnyama we-trans, umvelisi womdlalo kunye nomama. Njengenxalenye yeXESHA LOKUHLAZIYWA KWEEMPAHLA uphuhlisa "Hamba Uyokundifumana": ugcino lwedijithali lwabantu abamnyama abadlulayo. "Indlela amabali kunye namava abantu abagqithisileyo agcinwa ngayo kubundlobongela esihlangabezana nabo ebomini bethu. Indawo yokugcina egcina amava omnyama othutho kufuneka alumke angabuyisi kwaye ajolise kumothuko. Oovimba abenziwe ngabantu abadlulayo banokusenza sikwazi ukubuqonda ngokuchanekileyo ubukho bethu. "
UDanielle Brathwaite-Shirley ligcisa laseLondon- kunye neBerlin-based Black transist, umphuhlisi womdlalo kunye nomama. KWEXESHANA ELIMISELWEYO, ebesebenza kwi- "Yiyokundifunela" - indawo yogcino lwedijithali yabantu abamnyama beTrans. "Ukuba kunjalo, indlela abantu abadlulayo abagciniweyo iyabomeleza okanye ibenza ubundlobongela esibe nabo ngelixesha siphila. Indawo yokugcina egcina amava amnyama okuTshintshana kufuneka alumke malunga nokungabuyeli emva kunye nokwenzakala okuphakathi. Oovimba abenziwe ngabantu beTrans yabantu baseTrans banokusenza sikwazi ukurekhoda ngokuchanekileyo ubukho bethu. "
NgeJografi yeNzondo, umlweli wegcisa uSujatro Ghosh uvavanya ukuba yintoni eqhuba intiyo-eyile ntiyo ijolise kuluntu oluthile lenkolo kwindawo ethile, kwelase-India. Injongo yakhe kukukhusela imyuziyam yokukhumbuza ukuqinisekisa ukuba ukungabikho kobulungisa akutshayelwa phantsi kombhoxo, kodwa kubanjwe kwimemori yenkcubeko ehlangeneyo, enika ubungqina bezinto ezimbi zembali yabantu.
NgeJografi yeNzondo, uMzabalazo weGcisa-uSujatro Ghosh uphonononga ukuba yeyiphi na inzondo-ngakumbi inzondo ejolise kuluntu oluthile kwinkolo ethile kwindawo ethile-kule meko, e-Indian subcontinent. Injongo kukukhusela imyuziyam yokukhumbuza, ukuqinisekisa ukuba ukungabi nabulungisa akutshaywanga phantsi kwekhaphethi kodwa kubhalwe kwimemori yenkcubeko ehlangeneyo njengobungqina bezinto ezimbi zembali yoluntu.
+ ILalson Nghaite, uArijit Bhattacharyya, uSudeshna Saha Roy, uBernd Lützeler
I-DCADV (i-Decolonial Contemporary African Diasporic Visions)
Ngexesha lokuhlala e-Oyoun, igcisa le-Afrocentric elinemisebenzi eyahlukeneyo u-Exocé Kasongo uphuhlise imisebenzi emitsha kunye nokurekhoda amaxwebhu amafutshane malunga nenkqubo yakhe yobugcisa, indlela aqhuba ngayo ezitalatweni kunye nokusebenzisana kwangaphambili. Ngomsebenzi wakhe, ufuna ukuzikhuthaza yena kunye namanye amalungu eAfrika angaphandle (a) ukudibanisa neenkcubeko kunye nezithethe zaseAfrika ngendlela yangoku - iAfrika entsha ekhangela inkcubeko, imbali, ubugcisa kunye nembuyekezo yokomoya.
Ngexesha lokuhlala ubugcisa e-Oyoun, i-Afrocentric Artist Artist u-Exocé Kasongo uya kususa imisebenzi emitsha kwaye arekhode amaxwebhu amafutshane malunga nenkqubo yakhe, indlela aqhuba ngayo esitratweni kunye nokusebenzisana kwakhe kwangaphambili. Usebenza ukuze azikhuthaze yena nabanye kwi-Diaspora yase-Afrika ukuze (re) banxibelelane neenkcubeko nezithethe zase-Afrika ngendlela yangoku-i-Afrika entsha ekhangela inkcubeko, ezembali, ezobugcisa kunye nokubuyiselwa ngokomoya.
+ U-Etsuki, u-Ibrahima Ndiaye, uSouleyman, u-Astan Meyer
Ibhokisi yePosi eMnyama
UGugulethu 'Dumama' Duma noDylan 'Hunter Chee' Greene banyanzela ufakelo olunxibelelanayo ngokubambisana nomculi wevidiyo uAyanda Duma. I-BLACK POST BOX ngamava emanyelwayo-yimvakalelo enesithuba sodandatheko-olumema abathathi-nxaxheba ukuba banxibelelane beve okufihliweyo kumava abo obuhlanga, inkcubeko kunye nokufuduka. Ukuboniswa kwabaphulaphuli kubhaliwe phantsi kwaye kuthunyelwe ngedangatye kwizinyanya ngexesha lomsitho wokuvala we-EMBODIED ARTS FESTIVAL.
UGugulethu 'Dumama' Duma noDylan 'Hunter Chee' Greene baququzelela ukufakelwa okuntywiliselwa ngentsebenziswano nomculi wevidiyo uAyanda Duma. I-BLACK POST BOX ngamava omboniso-imvakalelo enesithuba sodandatheko, -imema abathathi-nxaxheba ukuba banxibelelane kwaye bamamele izinto ezifihliweyo kumava abo obuhlanga, inkcubeko kunye nokufudukela kwelinye ilizwe. Ukuboniswa kwabaphulaphuli kuya kubhalwa phantsi kwaye kuthunyelwe ngedangatye kwizinyanya ngexesha lomsitho wokuvala UMBhiyozo WOBUGCISA.
I-Ascension-Amalungu asondeleyo amaBali aThintelweyo
UGqr. U-Maiada Aboud usebenza nabathathi-nxaxheba abasixhenxe kuthotho lweeworkshops malunga nesazisi, ubufazi kunye nentlungu, ii-taboos malunga nokuya exesheni, ukulingana notshintsho kwezentlalo. Iziphumo zeprojekthi zibandakanya uthotho lobungqina kunye nomsebenzi omtsha oza kuboniswa ngexesha lomnyhadala. Ukongeza, i-Maiada ithatha uthotho lweengxoxo malunga nesini kunye neetaboos, eziza kupapashwa xa kusenziwa umnyhadala.
Ukulandela umnxeba ovulekileyo, uGqr. U-Maiada Aboud usebenze nabathathi-nxaxheba abasixhenxe kuthotho lweeworkshops egxile kubuni, ubufazi, iintlungu, ii-taboos malunga nokuya exesheni, amalungelo alinganayo kunye notshintsho kwezentlalo. Iziphumo zeprojekthi ziya kubandakanya uthotho lweevidiyo zobungqina kunye nomsebenzi omtsha oza kuboniswa ngexesha lomnyhadala. I-Maiada ikwarekhoda uthotho lweengxoxo malunga nesini kunye neetaboos esiza kuzikhupha ukuya kumnyhadala.
+ UAntonia Führ, uChristina Gabriela Galli, uMaria Trinks, u-Uli Pilwax
UGqr. UMaiada Aboud
Ingxolo yomzimba wamakhokho
UGugulethu 'Dumama' Duma, umphandi wezenkcubeko, imvumi yesintu yexesha elizayo kunye nomfundi wobomi bokomoya, ukhokela abathathi-nxaxheba abahlanu abazichaza njengenxalenye ye-BIPOC diaspora eBerlin ngenkqubo yokuphilisa inkcubeko yeeveki ezintandathu nge-biomythography kunye nokunxibelelana kwakhona nezinyanya. Kule nkqubo, intsalela yesiko ihlonitshwa ngokusondelelana kunye nokusondelelana kwezwi, ukusebenzisa amandla okuyila ngokudibeneyo okuphuhlisiweyo kwixesha lokwahlukana kwezentlalo phakathi kokuchaswa kwezopolitiko nezentlalo.
Umphandi wezenkcubeko, imvumi yengoma yexesha elizayo kunye nomfundi wobomi bokomoya obude, uGugulethu 'Dumama' Duma ukhokela abathathi-nxaxheba aba-5 abachonga njengenxalenye ye-BIPOC diaspora eBerlin ngeveki ye-6, ukuphilisa inkcubeko kwi-biomythography kunye nokunxibelelana kwakhona kwezinyanya. Kuza kugxilwa ekuhlonipheni intsalela yesiko ngokusondelelana nokusondela kwilizwi, ukubandakanya amandla okuyilwa okuhlangeneyo okuphuhliswe phakathi kokuchasana kwezopolitiko nakwezentlalo ngexesha lokwahlukana kwezentlalo.
+ UDuduetsang 'blk .anaana' Lamola, Sailesh Naidu, Suelen Calonga, Indrani Ashe, Yin Cheng-Kokott, KooChaa.
UDuduetsang 'blk.banaana' Lamola
Umkhomba-ndlela wobugcisa: Madhumita Nandi
ICuration kunye noMncedisi weMveliso: uDami Choi
Ividiyo kunye neMveliso yoMsinga: arjunraj
Unxibelelwano: uHelen Gimber
Imveliso: Iqela le-Oyoun
Abalondolozi / Amagcisa / Abadlali / Abathathi-nxaxheba:
Exoce Oob Kasongo, uGqr. Maiada Aboud, Sujatro Ghosh, Sana Rizvi, Nane Kahle, Kopano Maroga, Gugulethu Duma aka Dumama, Danielle Brathwaite-Shirley, Kerim Malik Becker, Cornelia Becker, Avril Stormy Unger, Ahmad BaBa, Sailesh Naidu, Suelen Calonga, Indrani Ashe, Yin Cheng -Kokott, KooChaa, Jessica Korp, Thokozani Heidi Sincuba, Maneo Refiloe Mohale, Pure, Antonia Führ, Christina Gabriela Galli, Maria Trinks, Uli Pilwax, Fadi Saleh, Farah Deen, Karin Cheng, Fatmanur Sahin, Carolin Spille, Mansou Ajang, Puang Aksornsawang, Ekta Mittal, Elle-Máijá Tailfeathers, Kathleen Hepburn, Anastasiya Miroshnichenko, Sourav Das Madonna Adib, Sonal Giani, Prashansa Gurung, Nabi A., Mandeep Praikhy, Paro, Iraima Ndiaye, Souleyéri, C'boko Carson, Lalson Nghaite, Arijit Bhattacharyya, Sudeshna Saha Roy, Bernd Lützeler, Klaus Schmitz, Sanjay Ramachandran, Debolina Chatterjee, Sutantro Ghosh, Dinesh Pushpavanam, Angana Moitra, Deep Ray, Ankur Dutta, Mukhede John, Anagh John, Anagh mos, Nawal Ali, Aparajita Ghosh, Daria Chesnokova, Pragya Debnath, Suchetana Dutta, Lee Jong Hun, Chris Glass, Samirah Siddiqui, Ans Farhat, Gerrard, Angana Moitra, Niyati Matata, Azeez, Julia Behrens, Amr Hassan, Lishuman Cheng, An Dwivedi, Utsav Dheeraj, Aamir Aziz, Eshna Kutty, Anoushka Kazi Rehman, Siddhesh Gautam, Maham Shahid Khan, Vasundhara Srivastava, Kalpna Puppet Theatre, Subham Mukherjee, Mahir Duman, Ghazal Ramzani, Ishwari Basu, Aindrila Mitratha, Aindrila Mitratha Antje Weitzel, Likhita Banerjee, Ashutosh Banerjee, Mihir Sharma, Britta Ohm, Raunak Agarwal, Baldeep Kaur, Nilasish Chaudhuri, Sayan Paul, Prinzenallee 58 eG, Land Salzburg, Brut Vienna.
(De) ikhowudi Trajectories Umsitho
(De) Ii-Coding Trajectories ziya kuba yinkqubo yophando lwentsebenzo eyenzeka ePrague. Amagcisa u-Ahmad BaBa kunye noGugulethu Duma bamema amagcisa anento yokwenza nokuguqula iikhowudi kunye nokuhlaziya inkumbulo efakwe kutshintshiselwano apho iqumrhu lisisazulu sophando oluqhubekayo. Kobu buhlanti, amagcisa ajonge ukusebenzisana namagcisa ajongene ne-Subaltern states kunye nelizwe. uphuhliso lwenkqubo yenkululeko kuluntu.
Isanga | I-Avril Stormy Unger
Ungenelelo lwentsebenzo kwimall esezingeni eliphezulu e-Bangalore, e-India eveza ukungalingani kwesakhiwo ekufikeleleni kwiimfuno ezisisiseko ezifana nokunakekelwa kwezempilo kunye namanzi acocekileyo.
Ilk عِلْق | Ahmad Baba
I-Ilk عِلْق ibonisa umbono we-Arab-Muslim wama-Arabhu wekamva eliqala ngokunyanga ngokubhala kwakhona imbali ngokwamntu kwaye (re) ukwakha isazisi esichazwe gwenxa kwaye sagqwethwa ngeendlela ezininzi.
Indlala yenyama kunye neMemori yenyama -Umbuzo emzimbeni
Uluhlu lokuDlalayo lweeMbongi eziMnyama nguKopano Maroga noManeo Mohale - ziintsana ezimbini ezimnyama, ezingamakhwenkwe ezingezozamabhinqa ezivela eMazantsi eAfrika ezithe phithi ngumnqweno nenkumbulo, umzimba nembali.
Ukudibanisa | I-Avril Stormy Unger
"Ukungaxazululwa kubonisa ukuba ndilindele ngaphakathi kuluntu kwaye ndijongana nezigaba zokungafundi, ukukhupha kunye nokutyhila kuhambo lwam lokuzazisa ngokutsha."
Yonke into oyichukumisayo uyayitshintsha, yonke into oyitshintshayo iyakutshintsha ngeSuelen Calonga I Ingxolo Yomzimba Wabahlali 2
Kule ngqungquthela ye-podcast, uDumama noSuelen baphonononga umsebenzi wokulwa nobuhlanga owenza isiseko seSuelen Calonga's poetic, audio-visual process. UDumama noSuelen banencoko ebonakalisayo nekhuthazayo malunga nenkqubo yeNgcaciso yoMzimba weAncestral kwezi veki, besazi iingcambu zikaSuelen.
Ukuphononongwa kweliphi igunya lentiyo
Isingeniso kwiprojekthi kaSujatro Ghosh yeOyoun's Embodied Temporalities ingqwalaselo yekharityhulam: "IJografi yeNzondo"
Ukutyhala iphepha, ukutyhala umoya kunye ne-Sailesh Nadu I-Ancestral Body Noise 2
Kulesiqendu se-OyoUniverse podcast, uDumama noSailesh babenencoko, betyhila iingcinga zabo kunye namava ngokubhekisele kwinkqubo yengxolo yomzimba we-Ancestral, ukuziqhelanisa ne-Sailesh kunye nokuhlola ngokomoya kwilizwe lokophupha.
Kuthunyelwe apha ukuba kuthunyelwe kunye no-Indrani Ashe I-Ancestral Body Noise 2
Kwisiqendu sale veki seNgcaciso yoMzimba weAncestral, u-dumama uncokola no-Indrani Ashe (@theshadowarchivist). Bebonke baya kuhambo lokucinga ngokungakhathali bekhupha imisebenzi eyahlukeneyo ka-Indrani: uthixokazi wam wazala isithixokazi, i-yoga ngaphandle kwe-adriene kunye nobudlelwane bakhe nesiko, ukhokho kunye nokufuduka.
Inkululeko kunye nesikhalo sendalo iphela, u-sis kunye no-Yin Cheng-Kokkot
U-Yin Cheng Kokott no-Dumama baya kuhambo olunzulu behlola ilizwi kunye nophawu lwezinyanya ekudlaleni njengoko ephinda efumanisa ubudlelwane bakhe nelizwi kunye nelizwi. Yin wabelana ngenkqubo yethenda kunye nokubonakalisa ukumbiza ngokuba ngumakhulu wakhe ongasekhoyo kuhambo lweNgcaciso yoMzimba wakhe, kunye nazo zonke izandi azizuze njengelifa kuye.
UAhmad ngumdlali weqonga / umdaniso waseLebhanon, igcisa kwezentlalo kunye nomfundi wenkosi kunyango lokunyanga oluhlala eBerlin.
Kwezobufazi, ubufazi kunye nokufumana ikhaya ngaphakathi
UGqr. U-Maiada Aboud kwincoko noJuliana Yazbeck -umculi-umbhali wengoma wase-Lebanese-waseMelika-waseBritane. Inxalenye yothotho lweencoko malunga nokuba ngumfazi onguvulindlela wasepirate * - kwezentlalo, kwezobugcisa nakwezopolitiko.
Kwesi siqendu sokuqala seNgcaciso yoMzimba weAncestral: Amasiko eNene (lula), iDumama kunye neKoocha ziya kuhlola ukusebenza kweendlela ezininzi.
Ebunjiwe libali phakathi kwamazwe amabini, u-Exocé Kasongo wazalelwa eFrance ngo-1995. Ukhulele kwindawo ethobekileyo kwaye wayeqonda kwangethuba ukuba ngobugcisa angoyisa yonke imiqobo kwaye aqonde uvakalelo lwakhe kunye nabantu ababemngqongile. Ndiyabulela kwiminyaka yakhe yamava, u-Exocé uziqinisekisa njengomdanisi (Krump / Hip-Hop) eneempembelelo zeAfro / Contemporary kwaye uqala ukuphuhlisa iiprojekthi ezingaphezulu.
Umsebenzi wegcisa, umbhali, umsebenzi wezenkcubeko kunye nomsunguli wombutho wobugcisa Nawuphi na uMzimba weZine, ngoku uhlala eBüssel. UKopano ukholelwa kakhulu kumandla othando.
Umzobi, umgcini, igqirha kunye neyoga. UNane usebenza ngemizimba yabantu, umculo kunye neendaba ezahlukeneyo zobugcisa. Ungumgcini kunye nombonisi weCult 'Sup'.
Imitya ebalulekileyo kunye noKopano Maroga | Ingxolo yomzimba wamakhokho
Esi siqendu sesibini, Ukwenziwa kweNtsomi: Umzimba ka-Ancestor u-Howls, yindibano yesibini ye-podcast yenkqubo yeNgxolo yoMzimba we-Ancestral. Ugqirha oqeqeshiweyo kunye nomsebenzi wezenkcubeko, uQondiswa James wabelana ngobulumko namava akhe ngokubhekisele kwinkqubela phambili, ubunzulu kunye nobunzulu bokuhamba kubizo lwezinyanya kumaziko amhlophe eKapa kwi-praxis yakhe yangaphambi kobukoloniyali.
Vula umnxeba · Iziko lokwenyani (lula) · Ukuhlala kwakhona kwiQela leAncestral
I-Ascension evulekileyo yokufowuna-amaQumrhu aSondeleyo amaBali aThintelweyo
Vula umnxeba Yiya kundifumanela uLondolozo oluMnyama oluDibeneyo lokuGcina
Iinqwelwana eziHluliweyo: Imikhondo yenu (i) | | Ingxolo yomzimba wamakhokho
UPhononongo oluHlanganisiweyo lweSiko kunye nokuSebenza- Okunxulumene nabathathi-nxaxheba beNgcaciso yoMzimba wamakhosi uNane Kahle, Astaan ​​KA, Kechou (Kerim Malik Becker) kunye nomgcini wophando, uGugulethu Duma (Dumama).